lulu: ဘာလချောင် ကြော်ကြရအောင်
at 2:40 PM Labels: မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ ချက်ပြုတ်ဟင်းလျာများ, ရိုးရာအစားအစာ, အကြော်အလှော်
အားလုံးသောမောင်နှမများ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့တော့ မောင်နှမများကို မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ ဘာလချောင်ကြော်နည်းလေး မျှဝေပေးပါရစေနော်။ ကျွန်မရဲ့ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်က 1100 W အားရှိပါ တယ်နော်။
ပန်ကန်းကန်လုံးကို ဆီ ၁၀ ကျပ်သားလောက်ထည့်၊ ပြီးရင် မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲ ထည့်ပြီး ဆီကို ၇ မိနစ် အပူပေးပါ။ ဆီပူလာရင် နနွင်းမှုန့်ထည့်ပြီး လှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီတစ်ဝက်ကို ထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက် ပါ။ ပြီးရင် ၁၀ မိနစ် အပူပေးပါ။ ၁၀ မိနစ်ပြည့်ရင် ကြက်သွန်တွေကို မွှေပေးပြီး နောက်ထပ် ၇ မိနစ် အပူပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကြက်သွန်နီလေးတွေက ၀ါရောင်သန်းနေပါပြီ။ အဲ့ဒီအပူနဲ့ပဲ ကြက်သွန်လေးတွေ ရွှေဝါရောင်သန်းလာတဲ့အထိ မွှေပေးပြီး ကြက်သွန်ကြော်ဖတ်တွေကို ဆယ်ပြီးတော့ ဆီစစ်ပေးထားပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကြက်သွန်နီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို ကြော်ပြီး ဇကာထဲထည့်ပြီး ဆီစစ်ထားလိုက်ပါနော်။
ကြက်သွန်တွေအားလုံးကြော်ပြီးသွားရင် ပုစွန်ခြောက်မညက်တညက်ကို အရင်ကြော်ပါ့မယ်နော်။ ပုစွန်ခြောက်ထဲကို သကြားလေးနည်းနည်းနဲ့ ဟင်းခပ်မှုန့်လေးနည်းနည်းထည့်ပြီး နယ်ပေးထားပါ။ ပြီးရင် ဖန်ပန်းကန်လုံးထဲ ဆီထည့်၊ ပြီးရင် ၇ မိနစ်လောက်အပူပေး၊ ဆီပူလာရင် နနွင်းမှုန့်လေး ထည့်ပြီး မွှေပေး၊ ပြီးရင်တော့ ပုစွန်ခြောက်တွေထည့်ပြီး ၇ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်လောက် ထိ ကြော်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ အားလုံး သမအောင်မွှေပြီးတော့ နောက်ထပ် ၃ မိနစ်လောက် အပူထပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် အကျက်ညီအောင် မွှေပေးပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ကြာကြာအထားခံပြီး စားရတာ မွမွလေးမို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်နော်။ ပြီးရင်တော့ ပုစွန်ခြောက် တွေကို ဆယ်ပြီးတော့ ဆီစစ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ကြော် ဆီစစ်ထားတဲ့အထဲက ထွက်လာတဲ့ ဆီတွေကိုလည်း ပြန်ထည့်ပြီး သုံးလို့ရတယ်နော်။ နောက် တစ်ခေါက်ကျရင် ဖန်ပန်းကန်က အပူရှိန်လည်း ရှိသေးတာမို့ အပူကို ၃ မိနစ်လောက်ထပ်ပေး၊ ဆီပူလာရင် နနွင်းမှုန့်ခပ်ပြီး ညက်အောင်ထေားထားတဲ့ ပုစွန်ခြောက်တွေထည့်၊ သကြားနဲ့ ဟင်းခတ် မှုန့်လေး နည်းနည်းစီထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်အရင် အပူပေးပါနော်။ ပြီးရင် ပန်ကန်းလုံးကို အပြင်ထုတ်ပြီး အထက်အောက် သမအောင်မွှေပြီး နောက်ထပ် ၇ မိနစ်လောက် ထပ်အပူပေးပါနော်။ ပြီးရင်တော့ ပုဇွန်ခြောက်တွေကို ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ထားပါ။
ပြီးတော့မှ ကြက်သွန်ကြော်နဲ့ ပုစွန်ခြောက်မွထောင်းကြော်တွေကို တစ်ခါရော၊ ငရုတ်သီးရယ်၊ ပုစွန်ခြောက်မညက်တညက်ထောင်းကြော်ရယ်၊ ကြက်သွန်ကြော်ရယ်နဲ့ တစ်ခါရောပေါ့နော်။ ၂ မျိုးစားလို့ရတာပေါ့နော်။ (ရောပြီးတဲ့ပုံကို ဓာတ်ပုံမရိုက်လိုက်ရဘူး၊ :P ဒီပုံလေးနဲ့ပဲ တင်းတိမ်ပေးပါနော်)
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ ကြော်တဲ့အတွက် ဆီကုန်သက်သာတယ်၊ အညှော်သက်သာတယ်၊ ဆီစင်တာလည်း သက်သာတယ်နော်။ နိုင်ငံခြားရောက်နေကြတဲ့ မောင်နှမတွေအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေစေမယ်နော်။
ဘာလချောင်ကြော်လိုပဲ တခြား အမဲသား၊ ဆိတ်သား၊ ၀က်သား၊ ကြက်သား တို့ကိုလည်း ပြုတ်ပြီးရင် အသားတွေကို ထောင်းပြီး၊ မွှပြီး အခုနည်းအတိုင်း ကြော်နိုင်ပါတယ်နော်။ စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါဦးနော်။ အကြိုက်တွေ့မှာ သေချာပါတယ်နော်။
ဘရဏီ October 10, 2011 at 3:27 PM
နော် တွေ အရမ်းမထည့်ပါနဲ့လား အမရယ်။ ဖတ်ရတာ တမျိူးကြီးမို့ပါ။
hote tae naw :p
Hin dwae ka dot kaung par dae naw
လုလု October 11, 2011 at 12:26 PM
ဘာဘီလေးရေ့့  စားပါ၊ ကြိုက်သလောက်သာ စားနော်။
အမည်မသိနဲ့ အကြံပေးမယ့်အစား နာမည်လေးပါ ထည့်ပြီးပြောတော့ ပိုပြီး ကောင်းတာပေါ့။
နော် တွေထည့်တာလည်း အကျင့်ပါနေလို့ပါ။
နော် တွေကြောင့် မျက်စိမနောက်ရလေအောင်ပေါ့ :P
အဲ့လိုကြော်ရင် မိုက်ကရိုဝေ့ အပေါ်မှာ ဆီတွေ စင်ကုန်မှာပေါ့နော်... အမ....
မဒမ်ကိုး October 13, 2011 at 11:21 AM
လုလု October 20, 2011 at 1:13 PM
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပေါ်မှာ ဆီတွေစင်တယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းမစင်ပါဘူး။ ချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ကို ပြန်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်နော်.
မဒမ်ကိုး (မဒိုးကန်) လို့ ရေးထားလို့ ပိုပြီး ရင်းနှီးသွားတယ်လို့ ခံစားလိုက်ရတယ်။ အလည်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.
yourfatherishere,callmepapa January 28, 2018 at 5:39 AM
သိပ်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်၊ Facebook မှာ Credit to လုလု! ဆိုပြီး share လိုက်တယ်နော်။ အားလုံးချက်ကြ၇စေဖို့၊ ကျေနပ်တယ်- ဟုတ် ?